Uhlu oluhehayo lwezinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux | Kusuka kuLinux
Uhlu oluhehayo lwezinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Kunconyiwe
Uhlu oluhehayo lwezinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux uhlu olukhulu lwezinhlelo zokusebenza, isoftware, amathuluzi nezinye izinto zeLinux ezihloliwe zonke ku-Ubuntu, mhlawumbe eziningi zazo zingasebenza ekusabalaliseni kwakho okuthandayo.
Eziningi zalezi zicelo kuxoxiwe ngazo lapha Kusuka ku-Linux, Abanye basanda kubahlangabeza kanti abanye abakwazanga ukubhala izindatshana eziningiliziwe ngalezi zinhlelo zokusebenza, kepha kusukela namhlanje siyazibophezela ekubhaleni ngazo. Lolu hlu luzobuyekezwa njalo, kungezwe izinhlelo zokusebenza osincomela zona nabanye esizokwazi ukuzihlola nokuzincoma.
1 Izicelo ze-Ubuntu / Linux
1.1 Izicelo Zomsindo ze-Ubuntu / Linux
1.2 Amaklayenti Okuxoxa we-Ubuntu / Linux
1.3 Izinhlelo zokusebenza zokulondoloza idatha nokubuyisa ze-Ubuntu / Linux
1.4 Izicelo namathuluzi wokwenza ngokwezifiso ideskithophu ye-Ubuntu / Linux
1.5 Izindawo zedeskithophu ze-Ubuntu / Linux
1.6 Izicelo namathuluzi okuthuthukisa we-Ubuntu / Linux
1.7 Izinsiza ze-E-Book ze-Ubuntu / Linux
1.8 Abahleli be-Ubuntu / Linux
1.9 Amathuluzi Wezemfundo Nezicelo ze-Ubuntu / Linux
1.10 Izicelo ze-imeyili / ze-imeyili namathuluzi we-Ubuntu / Linux
1.11 Abaphathi befayela be-Ubuntu / Linux
1.12 Imidlalo ye-Ubuntu / Linux
1.13 Izicelo ze-Graphics namathuluzi we-Ubuntu / Linux
1.14 Izicelo ze-Intanethi namathuluzi we-Ubuntu / Linux
1.15 Izicelo Zokukhiqiza kanye Namathuluzi we-Ubuntu / Linux
1.16 Izicelo namathuluzi okuphepha we-Ubuntu / Linux
1.17 Izicelo namathuluzi wokwabelana ngamafayela ku-Ubuntu / Linux
1.18 Isikhumulo se-Ubuntu / Linux
1.19 Izinsiza ze-Ubuntu / Linux
1.20 Amathuluzi Wevidiyo Nezicelo ze-Ubuntu / Linux
1.21 Abaphathi bamawindi be-Ubuntu / Linux
1.22 Ezinye izinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux
Izicelo ze-Ubuntu / Linux
Izicelo Zomsindo ze-Ubuntu / Linux
Isikhathi somoya: Isoftware evulekile yokusakaza yokuhlela nokuphatha iziteshi ezikude.
I-Ardor: Ivumela ukurekhoda, ukuhlela nokuxuba ku-Linux. Ungafunda kabanzi mayelana I-Ardor ku:
Izicelo ezi-5 eziphezulu zamahhala zokukhiqiza umculo
I-Ardor 3, i-DAW engcono kakhulu yamahhala kuze kube manje, etholakalayo ukulanda
Ukucwaninga: Isidlali somsindo esivulekile somthombo ovulekile, sikuvumela ukuthi udlale umculo wakho ngaphandle kokusebenzisa izinsiza kusebenza eziningi kukhompyutha yakho.
Ungafunda kabanzi mayelana Ukucwaninga ku:
I-2.3 ebucayi iphumile
Ukucwaninga: Kuyisoftware yamahhala, yama-multiplatform kanye nomthombo ovulekile ekuvumela ukuthi urekhode futhi uhlele imisindo.
Ungafunda kabanzi mayelana Ukuziphendulela ku:
Ukucwaninga kanye nama-TBRG
Umsindo womsindo: Kuyirekhoda elula yomsindo etholakala ku-Ubuntu PPA.
UClementine: Dlala amafomethi ahlukahlukene womsindo ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi. Ungafunda kabanzi mayelana Clementine ku:
UClementine 1.0 ufika!
UClementine 1.0 kanye nosesho lwawo lomhlaba jikelele
UClementine: Enye indlela eqinile e-Amarok
ICantata vs Amarok vs Clementine, Impi Esindayo
Lungisa ukubukeka kukaClementine ku-Ubuntu 14.04
I-Google Play Music Destokp Player: I-cross-platform iklayenti le-Desktop elingavumelekile ukudlala umculo kusuka Play music Umculo.
I-Hydrogen: Ungumshini wesigubhu othuthukile we-GNU / Linux.
I-KXStudio: Iqoqo lezicelo nama-plugins wokukhiqiza umsindo oqeqeshiwe.
K3b: Ithuluzi lokuqhafaza eliphelele lokushisa i-CD / DVD futhi yenzelwe i-KDE.
I-Kid3Qt: Ikuvumela ukuphatha nokuthega umculo wakho, isibonelo, umculi, i-albhamu, unyaka nohlobo lwawo wonke amafayela e-MP3 akwi-albhamu.
Masenze umculo: Ikuvumela ukuthi wenze umculo kukhompyutha yakho ngokwakha imiculo nezigqi, ungahlanganisa futhi uhlanganise imisindo, futhi uhlele amasampula nezinye izinto eziningi.
I-Mixxx: Ithuluzi lomthombo we-DJ ovulekile, elihlinzeka ngakho konke okudingayo ekuxubeni okubukhoma, enye indlela enhle kakhulu ugandaganda.
Ungafunda kabanzi mayelana I-Mixxx ku:
IMixxx 2.0: Hlanganisa amathrekhi ngesitayela esihle se-DJ
I-SoundJuicer: Kuyithuluzi elikuvumela ukuthi ukhiphe amathrekhi alalelwayo, ngendlela efanayo, ine-cloner ne-CD player.
Tomahawk: Isidlali esihle kakhulu esikuvumela ukuthi udlale ukusakaza, umculo olandiwe, umculo efwini ( I-SoundCloud, Spotify, Beats, i-YouTube phakathi kwabanye), uhlu lwadlalwayo, iziteshi zomsakazo nokuningi. Iphinde ibe nokuhlanganiswa nezingosi zokuxhumana nabantu, ngaphezu kokusivumela ukuthi sixhumane nabanye abantu ngeGtalk noJabber.
Amaklayenti Okuxoxa we-Ubuntu / Linux
IGhettoSkype: Umthombo ovulekile Ingxoxo yeklayenti ye-Skype.
I-HexChat: Yiklayenti le-IRC elisuselwa ku-X-Chat, kepha ngokungafani ne-X-Chat imahhala ngokuphelele kumasistimu afana ne-Windows ne-Unix.
Isilayezi sedeskithophu: Kuyinto isicelo se-Facebook messenger.
I-Pidgin: Iklayenti lengxoxo yendawo yonke. Ungafunda kabanzi mayelana I-Pidgin ku:
Ingxoxo ye-Facebook ku-Pidgin & Empathy ngaphandle kwama-plugins akhethekile
Izithonjana ezinhle zethreyi likaPidgin
Isandiso sokuhlanganisa i-Pidgin ku-Gnome-Shell
Itimu enhle yesithonjana se-Pidgin ephefumulelwe yi-Adium
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp ku-Linux nge-Pidgin
Faka i-HipChat noma usebenzise ingxoxo ye-HipChat kusuka ku-Pidgin
Sebenzisa i-Chat Protocol "Line" ku-Pidgin ye-Linux Mint 17 Qiana
I-HowTo: Xhuma engxoxweni ye-Facebook ne-Pidgin (futhi)
IScudCloud: Iklayenti le-Slack le-Linux.
Ukuxega-Gitsin: Iklayenti elizosebenzisa iSlack kusuka kukhonsoli. Ungafunda kabanzi mayelana Ukuxega-Gitsin ku:
Ungayisebenzisa kanjani iSlack kusuka kukhonsoli ngeSlack-Gitsin
Skype: Iklayenti elisemthethweni le-Skype le-Linux, ithuluzi elikuvumela ukuthi uxhumane mahhala.
yocingo: Isicelo sokuthumela imiyalezo sigxile kusivinini nokuphepha, kushesha kakhulu, kulula futhi kumahhala.
Ungafunda kabanzi mayelana yocingo ku:
Ingxoxo neMega neTelegram, kungani sidinga ama-Hangouts noma i-WhatsApp?
Amathiphu wokufaka i-Popcorn Time, Spotify neTelegram ku-DEBIAN
Viber: Viber ILinux ikuvumela ukuthi uthumele imilayezo yamahhala futhi wenze izingcingo zamahhala kwabanye abasebenzisi beViber abavela kunoma yiliphi izwe.
Whatsie: Iklayenti lengxoxo elizimele le-WhatsApp
FranzIklayenti lengxoxo okwamanje elisivumela ukuthi sihlanganise i-WhatsApp, i-Slack, i-WeChat, i-HipChat, i-Facebook Messenger, i-Telegram, i-Google Hangouts, i-GroupMe, i-Skype, isib phakathi kwabanye.
Izinhlelo zokusebenza zokulondoloza idatha nokubuyisa ze-Ubuntu / Linux
Isipele se-Borg: Ithuluzi elihle lokusekela ngokulondoloza.
I-Photorec: Kuyisoftware yokuthola idatha eyenzelwe ukuthola amafayela alahlekile, kufaka phakathi ividiyo, izithombe, amadokhumenti namafayela avela kuma-hard drive, ama-CD-ROM, namakhamera edijithali. Ungafunda kabanzi mayelana I-Photorec ku:
Phinda ususe amafayela kalula nge-Photorec kusuka kukhonsoli
I-Qt4-fsarchiver: Kuyisixhumi esibonakalayo sokuqhafaza sohlelo umabhebhana Ivumela ukonga / ukubuyisa ukwahlukanisa, amafolda ne-MBR / GPT. Uhlelo lolu lwe-Debian, Suse ne-Fedora based systems.
CD Rescue CD: Yidiski yokuhlenga ye-GNU / Linux, etholakala ukusetshenziswa njenge-CD-ROM noma i-USB ebhuthazekayo, ukuze kulawulwe noma kulungiswe isistimu, futhi ivumela ukutakula idatha. Ungafunda kabanzi mayelana CD Rescue CD ku:
ISystemRescueCd 1.5.2 iphumile, distro ukulungisa isistimu yakho
I-SystemRescue CD v2.4.0 ikhishwe
Idiski yokuhlola: Kuyisoftware yokuthola idatha enamandla mahhala. Yenzelwe ngokuyinhloko ukusiza ukuthola ukwahlukana okulahlekile kanye / noma ukuguqula amadiski angabhuliwe abe ngamadiski aqalekayo lapho lezi zimpawu zibangelwa isoftware engalungile.
Izicelo namathuluzi wokwenza ngokwezifiso ideskithophu ye-Ubuntu / Linux
I-Arc Theme: Itimu eyisicaba enezinto ezisobala
Imenenja yezilungiselelo ze-Compiz Config: Le Phrojekthi yeDeskithophu ye-3D iletha imiphumela ebonakalayo eyenza ngcono ukusetshenziswa kohlelo futhi inikeze umkhiqizo ophezulu.
Conky: Kuyinto engasindi uhlelo lokuqapha, olubonisa noma yiluphi uhlobo lolwazi kudeskithophu yakho.
I-Flatabulous: Le yingqikithi ye-Flat ye-Ubuntu nokunye ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux kwe-Gnome.
Ingqikithi ye-Flatabulous Arc: Itimu yami engiyithandayo ye-Ubuntu.
Itimu ye-Irradiance: Itimu ephefumulelwe yi-OSX Yosemite ngokususelwa ku-Radiance.
Izandiso ze-Gnome: Izandiso zedeskithophu ye-Gnome.
I-Numix Icon Theme: Enye yezingqikithi zesithonjana esihle kakhulu se-linux ubuntu.
Itimu ye-Numix: Isihloko esihle futhi sithandwa kakhulu.
I-Papirus Icon Theme: Enye yezingqikithi zesithonjana esihle kakhulu se-linux ubuntu.
I-Unity Tweak Ithuluzi: Kufanele ube nesicelo sokwenza ngokwezifiso ubuntu.
Yosembiance indaba ephathwayo: Itimu yobumbano ephefumulelwe yi-OSX Yosemite ngokususelwa ku-Ambiance.
Izindawo zedeskithophu ze-Ubuntu / Linux
Isinamoni: Isimo sedeskithophu Isinamoni.
Ungafunda kabanzi mayelana Isinamoni ku:
ICinammon 1.2 iyatholakala, nezinto zokubhala nokuningi
I-Gnome: Isimo sedeskithophu I-Gnome. Ungafunda kabanzi mayelana I-Gnome ku:
Amaphuzu wekhodi. Ungazifaka kanjani izinhlamvu kumaGnomes
Nika amandla umsebenzi wokuchofoza okukodwa ku-touchpad yeGnome
Ukubuyekezwa okufushane kwe-GNOME 3.16
I-Headerbar: ingqikithi yokuhlanganisa iFirefox kuGnome
Faka iGnome Classic (Flashback) ku-Ubuntu 14.10 / Linux Mint 17
KDE: Isimo sedeskithophu KDE. Ungafunda kabanzi mayelana KDE ku:
Nciphisa noma yiluphi uhlelo lwe-KDE kutreyi yesistimu
I-Prelink (noma ungayenza kanjani i-KDE boot ngemizuzwana emi-3)
Umlingani: Isimo sedeskithophu MATE kungukuqhubeka kwe-GNOME 2. Inikeza imvelo yedeskithophu enembile futhi ekhangayo. Ungafunda kabanzi mayelana MATE ku:
Ubuntu MATE sekuvele "kunambitheka" okusemthethweni kwe-Ubuntu
[Kanjani] Izinhlelo ze-Debian Testing + Mate +
Unity: Isimo sedeskithophu Unity. Ungafunda kabanzi mayelana Unity ku:
Ungaqala kanjani kabusha ubumbano esimweni esiphuthumayo
I-Xfce: Imvelo yedeskithophu Xfce. Ungafunda kabanzi mayelana Xfce ku:
Izindaba ezivela XFCE !! Yini okusha kuXfce 4.12?
Izicelo namathuluzi okuthuthukisa we-Ubuntu / Linux
I-Android Studio: Yi-IDE esemthethweni ye- Android, Ihlinzeka ngamathuluzi asheshayo okwakha izinhlelo zokusebenza zamadivayisi ahlukahlukene we-Android. Ungafunda kabanzi mayelana I-Android Studio ku:
Android Studio (noma i-ADT) ku-KDE ngaphandle kokufa emzameni
I-Aptana: I-Aptana Studio isebenzisa ngokunenzuzo ukuguquguquka kwe-Eclipse futhi igxile kunjini enamandla yokuthuthukisa iwebhu.
I-athomu: Isihleli sombhalo esihle kakhulu.
Ungafunda kabanzi mayelana I-athomu ku:
I-Atom 1.0 iyatholakala ukulanda
I-Arduino IDE: Kungumthombo ovulekile we-IDE osiza ukubhala ikhodi ye-Arduino.
I-BlueJ: Kuyindawo yokuthuthuka yamahhala yeJava eyenzelwe abaqalayo, esetshenziswa izigidi zabantu emhlabeni jikelele.
Ikhodi :: Amabhulokhi: Yindawo yokuthuthuka yamahhala ye-C, C ++ neFortran, eyakhelwe ukwanelisa izidingo ezidinga kakhulu zabasebenzisi bayo. Idizayinelwe ukwelula kakhulu futhi isebenze ngokuphelele.
ICodeLite: Ungumthombo ovulekile ne-cross-platform IDE ye-C, C ++, PHP neNode.js.
eclipse: I-IDE edumile yeJava, C / C ++ ne-PHP enokusebenza okuningi
Kuyamangaza: Kuyithuluzi lokuklama mahhala kwe-elekthronikhi, lesi sinyathelo senza i-elektroniki itholakale kunoma ngubani
Ungafunda kabanzi mayelana Kuyamangaza ku:
UFritzing: ithuluzi lokuklama elenziwe mahhala
UGeany: Ungumhleli wombhalo othuthukiswe kwi-GTK, enezici eziyisisekelo zemvelo yentuthuko edidiyelwe. Yenzelwe ukuhlinzeka nge-IDE encane futhi esheshayo, eyayinokuncika okumbalwa kuphela kwamanye amaphakheji.
Ungafunda kabanzi mayelana UGeany ku:
I-Genymotion: I-emulator ephelele ye-Android. Ungafunda kabanzi mayelana I-Genymotion ku:
I-Git: Luhlelo lwamahhala futhi oluvulekile lomthombo, olwenzelwe ukuphatha ngokushesha nangempumelelo konke ukulawula inguqulo yamaphrojekthi amancane namakhulu. Ungafunda kabanzi mayelana I-Git ku:
Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code
Umhlahlandlela osheshayo wokusebenzisa iGit
Amathiphu: Imiyalo engaphezu kwengu-100 yeGit okufanele uyazi
IntelliJ IDEA: IDE enamandla yeJava
I-KDevelop: I-IDE yomthombo ovulekile futhi ovulekile, enokusebenza okuningi futhi okunwebekayo nge-plug-in ye-C / C ++ nezinye izilimi zokuhlela.
Komodo Hlela: Ungumthombo wamahhala futhi ovulekile we-IDE osekela izilimi eziningi. Ungafunda kabanzi mayelana Komodo Hlela ku:
Iyakhanya: Isihleli sekhodi yokugcina isizukulwane, esivumela ukufaka amakhodi bukhoma.
MariaDB: Enye yamaseva wedatha ethandwa kakhulu. Kwenziwe ngabathuthukisi bokuqala be-MySQL.
Ungafunda kabanzi mayelana MariaDB ku:
I-MonoDevelop: I-cross-platform IDE ye-C #, C # nokuningi -.
I-Nemiver: Kuyisilungisi se-C / C ++ esihlangana nemvelo yedeskithophu ye-GNOME.
O-my-zsh: Uhlaka lokuphatha ukumiswa kwe-zsh.
Ungafunda kabanzi mayelana O-my-zsh ku:
Faka i-zsh bese uyenza ngezifiso nge-Oh My Zsh
I-PyCharm: IDE enamandla yePython
I-PostgreSQL: Luhlelo lwemininingwane lwemithombo enamandla futhi evulekile.
Postman: Dala usizo lwama-API ngokushesha
Qt uMdali: I-cross-platform integrated integrated environment (IDE), eyenzelwe ukwenza lula ukwakhiwa kwamadivayisi axhunyiwe, izixhumi zomsebenzisi nezinhlelo zokusebenza.
Unogwaja VCS: Kuyisethi yamathuluzi wokuqhafaza enzelwe ukunikeza ukufinyelela okulula nokuqondile kumasistimu wokulawula inguqulo.
Umbhalo ophansi: Omunye wabahleli bombhalo ongcono kakhulu engizamile futhi engiyisebenzisayo njengamanje. Ungafunda kabanzi mayelana Umbhalo ophansi ku:
Umbhalo Ophakeme 2: umhleli wekhodi ongcono kunabo bonke otholakalayo?
Abakaki vs SublimeText3: Yikuphi okufanele ukhethe?
Ungawufaka kanjani umbhalo we-Sublime 3 ku-openSUSE
Swift: Kuwulimi lohlelo oluhlose injongo ejwayelekile olwakhiwe kusetshenziswa indlela yesimanje yamaphethini ezokuphepha, ukusebenza, nokwakhiwa kwesoftware
Ubuntu-SDK: I-Ubuntu SDK esemthethweni. Ungafunda kabanzi mayelana Ubuntu-SDK ku:
Ukuhlola i-Visual Studio Code
I-ZshIgobolondo lomugqa onamandla womyalo.
Izinsiza ze-E-Book ze-Ubuntu / Linux
I-Caliber: Isoftware enesixhumi esibonakalayo esibi ngandlela thile, kepha inamandla okuphatha nokuguqula ama-e-book.
Ungafunda kabanzi mayelana I-Caliber ku:
I-Caliber: uhlelo oluhle kakhulu lwe-Open Source lokuphathwa kwezincwadi ze-E
Ungaguqula kanjani ama-ebook ngeCaliber
I-Evince: Kungumbukeli wedokhumenti wamafomethi amaningi wedokhumenti. Inhloso ye- I-Evince ukufaka esikhundleni ababukeli bemibhalo abaningi abakhona kudeskithophu ye-GNOME ngohlelo lokusebenza olulodwa olulula.
I-Foxit: I-Foxit Reader 8.0, owine umklomelo I-PDF Reader.
FBReader: Enye yezicelo ezithandwa kakhulu eReader. Ungafunda kabanzi mayelana FBReader ku:
I-FBReader: Isifundi esilula samafayela e-ebook ku-Linux
ULucidor: Luhlelo lokufunda nokuphatha izincwadi ezisebenza ngogesi. ILucidor isekela ama-e-book ngefomethi yefayela le-EPUB namakhathalogi ngefomethi ye-OPDS. Ungafunda kabanzi mayelana ULucidor ku:
Lucidor, uhlelo lokufunda ama-e-book
Umhleli we-MasterPDF: Isihleli esikahle futhi esihle sePDF seLinux.
I-MuPDF: Isifundi se-PDF esingasindi esinombukeli we-XPS.
Ungafunda kabanzi mayelana I-MuPDF ku:
I-MuPDF: isibukeli se-PDF esheshayo nesisindo esincane
Isifundi se-PDF esisebenzisa kuphela i-3MB
OkularNgumbukeli wendawo yonke owakhiwe yi-KDE. Okular kuyipulatifomu eningi.
Sigil: Ungumhleli we-e-book wama-multiplatform.
Abahleli be-Ubuntu / Linux
Kulungile: Ungumhleli onamandla ohlose abahleli bezinhlelo nabathuthukisi bewebhu, ngezinketho eziningi zokubhala amakhasi e-web, imibhalo kanye nekhodi yohlelo. Ungafunda kabanzi mayelana Kulungile ku:
Abakaki: Isihleli sombhalo sanamuhla sokwakhiwa kwewebhu.
Ungafunda kabanzi mayelana Abakaki ku:
Abakaki, i-IDE yentuthuko yewebhu ethembisayo
Faka Abakaki ku-ArchLinux ngesandla
Emacs: Isihleli Sombhalo, Umthombo Wamahhala Futhi Ovulekile, owandekayo, owenziwe ngezifiso futhi nezinye izici eziningi.
Ungafunda kabanzi mayelana Emacs ku:
I-Gedit: Ungumhleli wombhalo we I-GNOME. Yize inhloso yayo ilula futhi isetshenziswa kalula, I-Gedit isihleli sombhalo esinenjongo ejwayelekile. Ungafunda kabanzi mayelana I-Gedit ku:
Kate: Ungumhleli wombhalo osezingeni eliphakeme wephrojekthi I-KDE SC, Futhi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo kwezinye izindawo zeDeskithophu, icishe ifane ne-IDE, egcwele izinketho nokusebenza. Kepha qaphela, kumhleli wombhalo kuphela.
Ungafunda kabanzi mayelana Kate ku:
AmaKate Schemes: Ukushintsha Imibala KaKATE
Umbhalo ophansi: Omunye wabahleli bombhalo ongcono kakhulu engizamile futhi engiyisebenzisayo njengamanje.
Vim: Ungumhleli wombhalo osezingeni eliphakeme, ofuna ukuhlinzeka amandla omhleli we-'Vi ', ngesethi ephelele yezici.
Ungafunda kabanzi mayelana Vim ku:
Isebenzisa i-VIM: Isifundo Esiyisisekelo.
Ungayifaka kanjani imibala i-syntax ku-VIM
ULwesihlanu wesikhumulo: Ukucabanga nge-Vim [Amanye amathiphu]
Amathuluzi Wezemfundo Nezicelo ze-Ubuntu / Linux
Isikhathi seBhayibheliIsicelo seBhayibheli esenziwe esitolo sezincwadi Inkemba y Qt.
UCelestia: Kungumkhathi wesikhala esivumela ukuthi uhlole indawo yonke ngobukhulu obuthathu.
I-Chemtool: Kuluhlelo oluncane lokudweba izakhiwo zamakhemikhali eLinux.
Ama-Epoptes: Ithuluzi lomthombo wamahhala nelivulekile lokuphathwa kwelabhorethri yamakhompyutha futhi inemisebenzi yokuqapha.
Gcompris: Kuyiphakethe lesoftware esezingeni eliphakeme elinemisebenzi eminingi yezingane ezineminyaka emibili kuya kwengu-2 ubudala.
GNUKhata: Isoftware yokubalwa kwemithombo evulekile.
Idempiere: Umthombo ovulekile we-ERP, owenziwe ngeJava nobuchwepheshe I-OSGI. Idempiere inenombolo enkulu yamamojula.
Ungafunda kabanzi mayelana Idempiere ku:
Idempiere, i-Open Source Erp enobuchwepheshe be-OSGI
Google Earth: Kuyiglobhu ebonakalayo, imephu kanye nohlelo lokwaziswa kwendawo.
I-GPeriodic: Kusetshenziswa kwetafula lezikhathi ze-Linux.
I-ITalc: Ithuluzi elinamandla nelifundisayo lothisha. Ikuvumela ukuthi ubuke futhi ulawule amanye amakhompyutha kunethiwekhi ngezindlela ezahlukahlukene.
Ungafunda kabanzi mayelana I-ITalc ku:
iTALC: ungayisebenzisa kanjani isoftware yamahhala ekilasini lakho lesikole
I-KDE Edu Suite: Isoftware Yemfundo yamahhala isuselwa kubuchwepheshe be KDE
MAPLE: Kuyisoftware yezibalo ehlanganisa injini yezibalo enamandla kunayo yonke emhlabeni, ene-interface eyenza kube lula kakhulu ukuhlaziya, ukuhlola, ukubona ngeso lengqondo nokuxazulula izinkinga zezibalo.
MATLAB: Ingxenyekazi MATLAB yenzelwe ukuxazulula izinkinga zobunjiniyela nezesayensi. MATLAB ingaqalisa ukuhlaziywa kwamasethi wedatha amakhulu.
Maxima: Kuyindlela yokuphatha izinkulumo ezingokomfanekiso nezingamanani, kufaka phakathi umehluko, ukuhlanganiswa, uchungechunge lukaTaylor, ukuguqulwa kweLaplace, ukulinganisa okujwayelekile, amasistimu wezibalo eziqondile, njll.
I-Moodle: Kuyindlela yokuphatha izifundo yokufunda online.
I-OpenEuclide: Kuyisoftware ye-2D geometry.
I-OpenSIS: Kuyisoftware yokuphathwa kwesikole.
Scratch: Kuyisoftware ekuvumela ukuthi uhlele izindaba zakho ezibandakanyayo, imidlalo kanye nokugqwayiza, ungabelana futhi ngendalo yakho nabanye emphakathini we-inthanethi. Scratch Kuyithuluzi elihle lokufundisa izingane ikhodi.
I-Stellarium: Kuyisoftware yamahhala evumela abantu ukuba balingise indawo yokubuka umhlaba kwikhompyutha yabo.
Ungafunda kabanzi mayelana I-Stellarium ku:
IStellarium: sibheke esibhakabhakeni
I-Stellarium 0.14.2 yabathandi besayensi yezinkanyezi
I-Tux4KidsI-Tux4Kids yenza isoftware esezingeni eliphakeme yezingane, ngenhloso yokuhlanganisa ubumnandi nokufunda kwiphakethe elilodwa elingenakuphikiswa.
Izicelo ze-imeyili / ze-imeyili namathuluzi we-Ubuntu / Linux
Evolution: Kuyisicelo sokulawulwa kwemininingwane yomuntu siqu esinikeza ukusebenza kwe-imeyili, ikhalenda nekheli.
Geary: Kuyinto isicelo se-imeyili esakhelwe ku-GNOME 3. Ikuvumela ukuthi ufunde futhi uthumele i-imeyili ngesibonisi esilula nesesimanje. Ungafunda kabanzi mayelana Geary ku:
IGeary: Iklayenti lemeyili elisha [+ Ukufaka ku-Debian]
I-Mailnag: Yi-daemon ehlola amaseva we-POP3 ne-IMAP ukuthola ama-imeyili amasha.
Thunderbird: Kuyisicelo samahhala se-imeyili okulula ukumisa, ukwenza ngezifiso, futhi kunezici eziningi. Ungafunda kabanzi mayelana Thunderbird ku:
Isipele Thunderbird neFirefox phakathi kweWindows neLinux
Sala kahle i-KMail, ngiyabuya eThunderbird
Ukushintsha indawo yephrofayili namafolda weThunderbird
I-Wmail: Iklayenti ledeskithophu elingavumelekile le-Linux kusuka I-Gmail ne-Google Inbox.
Abaphathi befayela be-Ubuntu / Linux
I-7zip: Vula amafayela we-zip. Ungafunda kabanzi mayelana I-7zip ku:
I-AngrySearch: Ikuvumela ukuthi useshe kwi-Linux, ikhombisa imiphumela esheshayo njengoba uthayipha.
I-Double Commander: Yimenenja yefayela, ipulatifomu enamapaneli amabili eceleni. Iphefumulelwe ngu Umlawuli ophelele futhi inemibono emisha.
Marlin: Kusha isiphequluli sefayela esinokukhanya okukhanyayo. Lesi siphequluli sizalwe kanye nephrojekthi ye-Elementary futhi senzelwe ukuthi sibe lula, sisheshe futhi sisebenziseke kalula. Ungafunda kabanzi mayelana Marlin ku:
Ukunikeza uMarlin ithuba
Faka uMarlin ekuhlolweni kwe-Debian
UMarlin: enye indlela ethokozisayo yeNautilus
Nautilus: Yimenenja yefayela eyenzelwe ukuhambisana nokwakheka nokuziphatha kwideskithophu I-Gnome, enikeza umsebenzisi indlela elula yokuzula nokuphatha amafayela abo. Ungafunda kabanzi mayelana Nautilus ku:
Bethela imininingwane kusuka kuNautilus ngeTurbo-Secure
Unika amandla kanjani ukubuka kwamapaneli ama-2 ku-Nautilus
Nemo: Ngumphathi wefayela wemvelo yedeskithophu I-Cinnamon.
I-QDirStatImenenja yefayela ene-graphical interface evumela ukuthi wena ubuke amafayela ahlala ngaphezulu isikhala samahhala kudiski yethu.
StowUmhloli wefayela ohlangana kahle kunoma iyiphi imvelo yedeskithophu. Stow kusekelwe ematheksthini futhi kuthuthukiswe ku Python .
Synapse: Isiqalisi esihle kakhulu sohlelo lokusebenza ku-Linux. Ungafunda kabanzi mayelana Synapse ku:
Ukuvumelanisa: isiqalisi sohlelo lokusebenza se-GNOME Do-style kepha sishesha kakhulu
IThunar: Le yimenenja yefayela ezenzakalelayo yeXfce 4.6. Yenzelwe ukuthi isheshe futhi isebenziseke kalula.
Ungafunda kabanzi mayelana IThunar ku:
Faka iThunar 1.5.1 ngamathebhu ku-Xubuntu 12.10 noma ku-12.04
Lokho uThunar angakaze abe nakho
Imidlalo ye-Ubuntu / Linux
0 AD: Ungumthombo wamasu wesikhathi sangempela wamahhala futhi ovulekile I-GNU / Linux kusethwe ezimpini zasendulo futhi kufana neminye imidlalo efana Ubudala Bamakhosi, Umbuso womhlaba o Ubudala Bezinganekwane. Ungafunda kabanzi mayelana 0 AD ku:
0 AD (Isu Lamasu kuLinux)
0 AD Alpha 2, izinto ziba ngcono
0 AD: i-clone yamahhala ye-Age of Empires
Impucuko5Impucuko kaSid Meier yamukelwa njengenye yama-franchise amasu amahle kunayo yonke.
I-Cockatrice: Umthombo ovulekile nomdlalo we-multiplatform ekuvumela ukuthi udlale amakhadi ngenethiwekhi.
Ungafunda kabanzi mayelana I-Cockatrice ku:
Dlala uMlingo: ukuhlangana okuku-PC yakho, mahhala neCockatrice
UDesura: Yisevisi yokusabalalisa yedijithali eqhutshwa ngumphakathi yabadlali bamageyimu, ebeka imidlalo engcono kakhulu, amamodeli nokuqukethwe okungalandwa kubathuthukisi ezandleni zabo, abakulungele ukuthenga nokudlala. Ungafunda kabanzi mayelana UDesura ku:
UDesura manje usengu-OpenSource
Ungayifaka kanjani i-Desura (Steam yeLinux)
I-GBrainy: Kungumdlalo wokuphambanisa ubuchopho, ovumela abadlali ukuthi bazijabulise futhi bagcine ubuchopho babo buqeqeshiwe.
Minecraft: Kungumdlalo ngokubeka amabhlogo nokuzijabulisa okuhlukahlukene. Hlola imihlaba ekhiqizwa ngokungahleliwe futhi wakhe izinto ezinhle kusuka emakhaya alula kuya ezinqabeni ezinkulu kakhulu. Ungafunda kabanzi mayelana Minecraft ku:
Faka iMinecraft kusuka ku-PPA
I-PlayOnLinux: Dlala imidlalo ye-Windows ku-Linux.
Ungafunda kabanzi mayelana I-PlayOnLinux ku:
I-PlayOnLinux noma ungayidlala kanjani imidlalo oyithandayo ye-Windows ku-Linux
Ama-Simutrans: Kuyisimo sokuhamba samahhala futhi esivulekile.
Ungafunda kabanzi mayelana Ama-Simutrans ku:
AmaSimutrans: umdlalo wesitayela weTycoon wezokuThutha
I-Steam: Kuyisiteji sokudlala esihlaba umxhwele, esivumela ukwenziwa kwemidlalo eminingi.
Iwayini (Isifinyezo se- "Wine Is Not an Emulator") ungqimba lokuhambisana olukwazi ukusebenzisa izinhlelo zeWindows kumasistimu ahlukahlukene wokusebenza.
I-Xonotic: Kuyinto umuntu wokuqala wokudubula, i-ultra-fast, okusisa ezikhathini zenkundla ye-fps. Inemodi yomdlalo womdlali oyedwa, kepha amandla ayo imodi yabadlali abaningi iphefumulelwe yi-Unreal Tournament neQuake.
Ungafunda kabanzi mayelana I-Xonotic ku:
I-Xonotic, umdlalo wabadlali abaningi omuhle kakhulu we-GNU / Linux
Izicelo ze-Graphics namathuluzi we-Ubuntu / Linux
AfterShot: Enye indlela enamandla ye-Adobe Photoshop!
I-AgaveKuyisicelo esilula sedeskithophu ye-GNOME ekuvumela ukuthi ukhiqize izikimu ezinhlobonhlobo zemibala eziqala ngombala owodwa.
blender: It is a free and open source tool for the creation of 3D spaces, animations and illustrations. Ungafunda kabanzi mayelana blender ku:
I-Blender 2.76b: Uma kukhulunywa nge-3D
Inhlanganisela yekhibhodi ku-Blender (Umq. I)
Amajakhethi aphansi: Ifilimu egqwayizayo yase-Argentina eyenziwe nge-Blender
Ungayakha kanjani i-3D Spaceships nge-Blender ne-SpaceshipGenerator
Umdwebo wesinema: Kuyisoftware yomthombo ovulekile yokudweba okujulile
I-Darktable: Kuluhlelo lomthombo ovulekile, ngokuhamba komsebenzi ngezithombe nonjiniyela weRAW
I-Digikam: Kuyisicelo esithuthukisiwe sokuphathwa kwezithombe zedijithali seLinux. Ungafunda kabanzi mayelana I-Digikam ku:
I-DigiKam: Hlela futhi uhlele izithombe zakho ku-KDE
I-Photosxx: Kuluhlelo lokuvula nokulawula ukuqoqwa komthombo ovulekile wamahhala.
I-GIMP: Kuluhlelo lokusatshalaliswa kwamahhala lwemisebenzi efana nokuthwebula kabusha isithombe, ukwakheka kwesithombe nokwakha isithombe
IHugin: Kuyindlela yamahhala yama-multiplatform yokwakha izithombe zephaneli nokulungiswa okuphezulu, ngaphezu kokuba namathuluzi angapheli wokuhlela isithombe. Ungafunda kabanzi mayelana IHugin ku:
I-Hugin: dala isithombe sakho se-panoramic esihle kakhulu.
I-Inkscape: Ungumhleli wehluzo ze-vector multiplatform, onemisebenzi ehlukahlukene eyenza i-Inkscape ithuluzi elinamandla nakho konke lokhu ngaphansi kwelayisense ye-GPL. Ungafunda kabanzi mayelana I-Inkscape ku:
I-Inkscape 0.91 ifika ilayishwe izindaba nokulungiswa
I-Inkscape + KDE: shintsha izithonjana zakho zethreyi yohlelo lwakho
Izinsizakusebenza zokufunda ukuthi ungasebenza kanjani ne-Inkscape
Chalk: Isoftware yomthombo ovulekile yabaculi bedijithali, abadwebi nemifanekiso Ungafunda kabanzi ngayo Chalk ku:
IKrita 2.8 ngokuxhaswa okungcono kwamaThebhulethi
Dala iKonqi entsha ngeKrita
UKrita ungowokugcina kuma-Open Source Awards 2011
I-HDR ye-Luminance: Kuwumthombo ovulekile wohlelo lokusebenza olunesibonisi esibonakalayo somsebenzisi esihlose ukuhlinzeka ukuhamba komsebenzi kwezithombe ze-HDR.
Ojo: Umbukeli wesithombe osheshayo futhi omuhle.
I-OpenShot: Isihleli sevidiyo samahhala, esisebenziseka kalula, nesicebile seLinux. Ungafunda kabanzi mayelana I-OpenShot ku:
Isikhishwe isibuyekezo esisha se-OpenShot 2.0
Ukuvula: Dala umbukiso wesilayidi wezithombe zethu
I-Openshot isivele ifakiwe kumakhosombe e-Ubuntu
Pinta: I-Pinta imahhala, isoftware yomthombo ovulekile yokudweba nokuhlela izithombe.
Ungafunda kabanzi mayelana Pinta ku:
I-Pint 1.2 etholakalayo
Pitivi: Isihleli sevidiyo samahhala esinokuxhumana okuhle futhi okunembile, isizinda sekhodi ehlanzekile nomphakathi omuhle.
Imisebe: Kuyisethi yezinhlelo zokuhlaziya nokubona ukukhanyisa komklamo.
I-RawTherapee: Isicelo esihle kodwa esincane esaziwayo sokuhlela isithombe.
Shotwell: Ngumphathi wezithombe we-GNOME 3.
Ukumisa: Kuyisicelo sesoftware samahhala sokwenza izithombe ezi-motion-motion. Kukusiza ukuthi uthwebule futhi uhlele amafreyimu opopayi futhi uwathumele njengefayela elilodwa.
I-Xara Extreme: Luhlelo olunamandla lwenhluzo jikelele.
Izicelo ze-Intanethi namathuluzi we-Ubuntu / Linux
I-Anatine: Iklayenti ledeskithophu le-Twitter elinokwezifiso eziningi.
Brave: Isiphequluli sedeskithophu esihle futhi esisheshayo seMacOS, Windows neLinux.
Ungafunda kabanzi mayelana Brave ku:
Ungazulazula kanjani ngokukhululeka nangokuphepha usebenzisa i-Brave
Chrome: Esinye seziphequluli zewebhu esidume kakhulu esinenombolo enkulu yama-plugins / ama-application.
Chromium: Yiphrojekthi yomthombo ovulekile ehlose ukwakha isiphequluli sewebhu esizinzile kunazo zonke, esivikelekile futhi esheshayo kubo bonke abasebenzisi.
Firefox: Esinye seziphequluli zewebhu esidume kakhulu esinenombolo enkulu yama-plugins / ama-application.
I-Tor: Isiphequluli sewebhu samahhala futhi esivulekile esikusiza ukuthi uvikele kuma-analytics e-web traffic, uhlobo lokuqapha olusongela inkululeko yomuntu siqu nobumfihlo.
Vivaldi: Isiphequluli esisha nesithuthukile esinokuzenzela okuningi.
Yandex: Isiphequluli esisheshayo nesisebenza kahle.
Izicelo Zokukhiqiza kanye Namathuluzi we-Ubuntu / Linux
I-Ambient Noise: Isicelo esikuvumela ukuthi ugxile ekukhiqizeni kwakho, ngenxa yomculo we-ambient.
I-Autokey: Kuyisicelo esizisebenzelayo sedeskithophu seLinux, sikuvumela ukuphatha imibhalo nemishwana, futhi unikeze izifinyezo nama-hotkey ngamunye wabo
Ama-Pads Note Ama-Pads: Lolu hlelo lokusebenza olunezinhloso eziningi lusiza ukuthatha kalula zonke izinhlobo zamanothi.
BrightnessIsikhombi Sokukhanya Sobuntu.
Ijubane - I-calculator ephezulu ngokunemba.
California: Isicelo seKhalenda esiphelele esisebenzisa ulimi lwemvelo ukudala imicimbi.
I-CopyQ: Ngumphathi webhodi yokunameka osezingeni eliphakeme onemisebenzi yokuhlela nokubhala.
F.lux: Ilungisa ngokuzenzakalela isikrini sekhompyutha ukufanisa ukukhanya.
Isichazamazwi se-Gnome: Isichazamazwi esinamandla se I-Gnome.
Kwenze: Kuluhlelo lokusebenza oluhle futhi oluhle lokukhiqiza, olunikeza uhlu lwezinto okufanele zenziwe, elihlangana nesibali sikhathi esigcina ukugxila kwakho emsebenzini wamanje.
Konke kwami: Imenenja elula yokwenza uhlu.
Isibonakaliso Sami Sezulu: Inkomba yesimo sezulu Ubuntu.
amanothi: Isicelo esilula sokuthatha amanothi ku-Linux.
I-Notepadqq: Kungenye indlela yokuhlela amanothi we-Notepad ++.
Iplanki: Ipulangwe limiselwe ukuba libe ichweba lesicelo elilula kakhulu emhlabeni.
I-PomoDoneApp: Kuyindlela elula yokugcina umkhondo wokuhamba kwakho komsebenzi usebenzisa inqubo yePomodoro, ngaphezulu kwensizakalo yakho yamanje yokuphathwa komsebenzi.
Papyrus: Yimenenja ehlukile yamanothi egxile kwezokuphepha, ukusebenziseka kangcono komsebenzisi. I-Papyrus izama ukuhlinzeka i-interface yomsebenzisi elula yokusebenzisa futhi ehlakaniphile yabasebenzisi.
UNoti wakamuva: Inkomba yesaziso yakamuva.
I-RedshiftIthuluzi elikuvumela ukuthi ulungise ukukhanya kwesikrini sakho ngokuya ngezinga lokushisa, isikhathi nesimo sezulu semvelo yakho. Lokhu kungasiza amehlo akho ukuthi angabi buhlungu kakhulu uma usebenza phambi kwesikrini ebusuku.
Ukuvala: Luhlelo lokuthwebula isikrini olunezici eziningi ezingeziwe.
Simplenote: Kuyinto isicelo sokubhala amanothi kuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Imbangi ka-Evernote.
I-Springseed: Isicelo esilula futhi esihle sokuthatha inothi nsuku zonke.
I-Stickynote: Kunamathela kudeskithophu oyikhonzile.
Todo.txt: Umhleli omuhle kakhulu wokuphatha nokubhala phansi imisebenzi yansuku zonke.
Todoist: Iklayenti elizimele le-Todoist, ipulatifomu yokuphathwa kwemisebenzi, isikhombimsebenzisi esihle somsebenzisi futhi inezici ezithile ze-premium.
Susa ukungikhipha: Yazisa uma imiyalo yesikhathi eside isiqediwe.
Xmind: Ithuluzi lokwenziwa kwemephu yengqondo.
I-WPS Office: Enye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zehhovisi zeLinux.
eZim: Isihleli sombhalo sokuqhafaza sisetshenziselwa ukugcina ukuqoqwa kwamakhasi we-wiki, alungele amadokhumenti. Kugcinwe kumafayili ombhalo ongenalutho wokulawula okulula.
Izicelo namathuluzi okuphepha we-Ubuntu / Linux
I-ClamAV: Kuyinto injini yomthombo ovulekile unqulo wesi arab ukuthola i-Trojans, amagciwane, i-malware nezinye izinsongo ezinonya.
I-GnuPG: Ikuvumela ukuthi ubethele futhi usayine idatha yakho nemiyalezo, inesistimu yokuphatha eyisihluthulelo ehlukahlukene, kanye namamojula wokufinyelela wazo zonke izinhlobo zezikhombisi-ndlela ezisemphakathini.
Gufw: Enye yezingodo ezilula emhlabeni weLinux.
I-OpenSSH: Iseva neklayenti le-OpenSSH Secure Shell
SeahorseIsixhumi esibonakalayo seGNOME seGnuPG
I-TcpdumpIthuluzi le-TCP Capture and Debugging
Izicelo namathuluzi wokwabelana ngamafayela ku-Ubuntu / Linux
CrossFTP: Ithuluzi elenza kube lula ukuphatha imisebenzi ehlobene ne-FTP.
D-lan: I-LAN yokwabelana ngefayela.
Ukhukhulo: Kuyisoftware yamahhala, i-cross-platform engasindi iklayenti leBitTorrent.
eyinqolobane: Yisevisi yamahhala ekuvumela ukuthi uthathe izithombe zakho, amadokhumenti namavidiyo wakho noma yikuphi futhi wabelane ngawo kalula.
UMeiga: Kuyithuluzi elenza sikwazi ukwabelana ngezinkomba ezikhethiwe zasendaweni ngewebhu.
uqoboCloud: Inhloso ye-ownCloud ukukunikeza ukufinyelela kumafayela akho noma ngabe ukuphi
I-Quazaa: Ipulatifomu le-multi-network peer-to-peer (P2P) lokwabelana ngamafayela phakathi kwamakhasimende
PushBullet: Xhuma amadivayisi akho, uwenze azizwe njengomunye.
QBittorentIphrojekthi ye-qBittorrent ihlose ukuhlinzeka ngenye indlela yesoftware yamahhala kuTorrent.
SpiderOak- Ukusebenzisana kwesikhathi sangempela kwezinkampani ezazi ubumfihlo namaqembu
Ukuvumelanisa: Ingena esikhundleni sefu lobunikazi nezinsizakalo zokuvumelanisa kunokuthile okuvulekile, okwethembekile nokwabelwe amandla.
I-TeamViewer: Isoftware elawulwa kude ye-PC / isoftware yokungena kude, mahhala ongayisebenzisa wena.
Ukuthutha: Iklayenti lesifufula elilula, elingasindi, elinamapulatifomu amaningi.
UGet: Umphathi wokulanda omuhle kakhulu weLinux.
Isikhumulo se-Ubuntu / Linux
I-GnomeTerminalI-emulator yokuphela efakwe kabanzi ngaphambili ezweni le-Linux
I-Guake: Kungukugcina okuphezulu phezulu kweGnome
UKonsole: I-terminal engcono kakhulu yedeskithophu ye-KDE.
I-Rxvt: I-emulator yokugcina ye-X11, indawo ethandwayo yezinga le-'xterm '.
I-Unicode ye-Rxvt: Kuyimfoloko ye-emulator yokugcina ethandwa kakhulu.
Isinqamuli: I-emulator enamandla kunawo wonke ku-Linux, igcwele izici.
Ithemu: I-emulator elula elula esuselwa kumtapo wezincwadi we-VTE, onwebeka ngeLua.
Izinsiza ze-Ubuntu / Linux
I-Actionaz: I-Automation Task Utility ye-Ubuntu / Linux
Bleach kancane: Khulula ngokushesha isikhala sediski futhi uvikele ubumfihlo bakho. Inqolobane yamahhala, sula amakhukhi, sula umlando, susa amafayela wesikhashana, susa amarekhodi nokuningi ...
I-Brazier: Isishisi se-CD / DVD.
I-Caffeine: Vimbela ubuntu ekuvaleni NGOKUZENZAKALELAYO.
IClonezilla: uhlelo lokwahlukanisa kanye nediski / ukuhlanganisa izinto olufana ne-True Image® noma i-Norton Ghost®.
I-Easystroke: uhlelo lokusebenza lokuqaphela isenzo se-X11.
Dlulisa: yenza impilo yakho ibe lula ngokuphatha ngokuphepha amaphasiwedi wakho nolunye ulwazi olubalulekile.
Inguqulelo: Guqula wonke amayunithi.
Imephu ye-GD: Ithuluzi lokubona ngeso lengqondo ukusetshenziswa kwediski.
Yenza okungajwayelekile: Isiguquli somsindo.
I-GParted: I-Disk partition utility ye-Ubuntu / Linux.
IGRadio: Isoftware yomsakazo ye-linux ubuntu -.
Ibhuleki lesandla: Isiqophi Converter.
I-KeePass: Umphathi wephasiwedi yeWindows, ngokuxhaswa okuncane kwesiphambano ngeMono.
I-KeePassX: Isiphathi sephasiwedi se-Multiplatform.
I-ImageMagik: Kuyisethi yezinsiza zomugqa womyalo wokuguqula nokusebenza nezithombe.
LastPass: Ipulatifomu yokuphathwa kwephasiwedi.
I-Powertop: Thola inkinga yokusebenzisa amandla.
Cindezela Umsindo: Thuthukisa i-Linux Audio ngamaphrofayela wangokwezifiso.
I-Peazip: Umbuso wokunciphisa amafayela acindezelwe
I-Psensor: I-Graphical Hardware Temperature Monitor ye-Linux.
Kuyamangaza: Isihleli esihle kakhulu seMarkdown ku-Ubuntu / Linux.
I-Remmina: Ithuluzi lokuphatha kude le-Linux kanye ne-Unix.
Ukulayisha kwesistimu: Khombisa ukulayishwa kwesistimu kubha yesimo.
I-Synaptic: Kuluhlelo lokuqhafaza lokuphathwa kwamaphakethe we-apt.
I-TLP: Lungiselela ibhethri le-Linux.
Izinhlobonhlobo: Inguquko yomthombo ovulekile wephephadonga le-Linux, egcwele izici ezinhle, kepha engasindi futhi kulula ukuyisebenzisa.
I-VirtualBox: Kuyi-virtualizer ephelele yenjongo ejwayelekile ye-x86 Hardware, iseva yokukhomba, ideskithophu, nokusetshenziswa okushumekiwe.
Umphathi Wokulanda weXtreme: Imenenja yokulanda enhle ene-interface yomsebenzisi epholile yeLinux.
I-WallpaperChange: Shintsha isithombe sangemuva ngokuzenzakalela.
Amathuluzi Wevidiyo Nezicelo ze-Ubuntu / Linux
Umdlali weBomi: Isidlali semidiya esinamandla futhi esisebenziseka kalula.
Ingabe: Isoftware yemithombo yamahhala nevulekile (GPL) yokudlala amavidiyo, umculo, izithombe, imidlalo nokunye.
I-MPlayer: Isidlali se-movie esisebenza ezinhlelweni eziningi, sidlala wonke amafomethi alalelwayo namavidiyo.
I-MPV: Isidlali se-multlatform semultimedia.
I-SMPlayer: Isidlali Semidiya esinama-codec akhelwe ngaphakathi. Idlala wonke amafomethi wevidiyo nomsindo.
I-SVP: Kukusiza ukuthi ubuke noma iyiphi ividiyo kukhompyutha yakho yedeskithophu usebenzisa ukuhlanganiswa kohlaka, njengoba kutholakala kumathelevishini aphezulu nakumaphrojektha.
I-VLC: Isidlali semidiya samahhala nesivulekile esidlala amafayela we-multimedia kanye nama-DVD, ama-CD alalelwayo, ama-VCD, nezinqubo ezahlukahlukene zokusakaza.
Abaphathi bamawindi be-Ubuntu / Linux
2bwm: Imenenja yefasitela esintantayo esheshayo.
awesome: Imenenja yefasitela elungiseka kahle kakhulu.
Bspwm: Imenenja yewindi ngokuya ngesikhala sokuhlukanisa kanambambili.
I-DWM: Umphathi wewindi onamandla we-X.
I-Fluxbox: Imenenja yewindi engasindi futhi elungisekayo kakhulu.
I-Herbstluftwm: Imenenja yefasitela leMosaic kaMosisi weX.
i3: Umphathi wewindi onamandla othuthukisiwe.
I-Openbox: Imenenja yefasitela ye-X11 elungisekayo futhi engasindi.
xmonad: Amathayili we-Window manager X11 abhalwe eHaskell.
Ezinye izinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux
I-Fail2ban: Ivumela ukuskena amafayela (isb. / Var / log / apache / error_log) futhi kuvinjelwe amakheli e-IP akhombisa izimpawu zokungena okunobungozi - ukwehluleka kwephasiwedi okuningi, kubheka ukuba sengozini, njll.
I-GrubCustomizer: Kuyinto isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukumisa izilungiselelo ze-grub2 / Burg kanye nemenyuentries.
I-Mycroft: I-AI yawo wonke umuntu
Lolu hlu oluhlaba umxhwele lususelwa ku- I-Awesome-Ubuntu-Linux de ULuong Vo Tran Thanh, owenze umsebenzi omkhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlu oluhehayo lwezinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux
Yeka indatshana enhle, umnikelo omuhle !!, sengivele ngiyilondoloze ephaketheni lapho ngifika ekhaya ngizozama amathuluzi we-ubuntu bami
URicardo Rafael Rodriguez Reali kusho
Ngomsindo, ngincoma isidlali seNuvola.
Phendula uRicardo Rafael Rodriguez Reali
Uhlu luhle futhi ngizolifunda ngokugcwele.
Okuthile ngaphakathi kimi kungitshela ukuthi izithombe azikho, kepha akufanele kungikhathaze, kepha kusenjalo.
ngiyabonga kakhulu mngani wasethekwini
helena llanos palomo kusho
Angiyitholi indlela yokufaka i-gz tarball
Phendula u-helena llanos palomo
I-athikili enhle kakhulu
Amathuluzi amahle kakhulu futhi athatha isikhathi ukuwasebenzisa, ngiyabonga futhi sihalalisela abaphathi bakho. umsebenzi omuhle !!
IPlasma 5.4 Beta iphume kuhhavini
Izinto eziyi-10 umakhi womthombo ovulekile okufanele azenze